FJKM Ankadindramamy Fahazavana » TORITENY 2020 – Alahady 26 aprily
Alahady 26 aprily 2020
TORITENY 2020 – Alahady 26 aprily
Natao ny 27 Avr 2020, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona
Finaritra e, faly miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Tompontsika.
Isaorantsika ny Tompo Andriamanintsika fa efa misokatra ny Trano Fiangonana rahampitso Alahady 26 Aprily 2020. Noho ny fandaminana anefa dia miisa 50 ihany no miara-mivavaka. Na dia misy fidirana miisa 6 aza dia mbola maro amintsika no tsy tafiditra ao am-piangonana.
Indro atolotra ho antsika mba iombonana isan-tokantrano ny fandaharana. Ho tanterahintsika any amin’ny isan-tokantrano any. Ezahina ihany koa ny hanome antsika ny « raki-peo » mirakitra izany fanomoam-pivavahana izany. Mirary soa e. Mahereza mivavaka.
Alahady 26 Aprily 2020 ( Alahady faharoa manaraka ny Paska )
Isaia 26. 11 – 19 ; Jaona 21. 20 – 25 ; 2 Korintiana 4. 16 – 18
1. Hira : 409
• Salamo 63. 1 – 5
• Hira : 167 / 1 , 3
• Hira : 758
• Vakiteny ( Isaia 26. 11 – 19 ; Jaona 21. 20 – 25 ; 2 Korintiana 4. 16 – 18 )
• Hira : 210 / 1 , 4
6 Hira : 427
• Hira : 338
9 Hira : 313 ( Hira vavaka ho an’ny Firenena )
Ndeha hojerentsika ny Isaia 41.10 « Aza matahotra fa momba anao Aho ; ary aza miherikerika foana fa Izaho no Andriamanitrao ; mampahery anao Aho sady mamonjy anao ; eny mitantana anao amin’ny tanana ankavanan’ny fahamarinako Aho » ( Isaia 41.10 ) // averintsika ho vakiana hoe : …..
Fantantsika moa izany atao hoe « momba » izany ? Momba dia midika hoe miandany, miaraka mandrakariva. Miaro amin’ny loza.
Ary ny hoe : «miheriherika » ? mitoditodika, mijerijery atsy sy aroa. Miherikerika ny olona rehefa misy zavatra mampatahotra azy, mitady fiarovana, mitady olona hamonjy.
– Mazava tsara ny Tenin’Andriamanitra eto : Andriamanitra dia miteny miandany, miaraka amintsika mandrakariva Izy, noho izany dia miteny Izy hoe : aza mitady vonjy, na famonjena hafa fa efa eo Izy, miaraka amintsika mandrakariva mba ho azo antoka ny lalantsika.
– Manamafy izany hatrany Andriamanitra eto : mampahery, mamonjy, mitantana. Andriamanitra mandray an-tanana ny fiainantsika Izy. Matokia Azy.
Ity misy tantara iray :
Mipetraka any ambanivohitra ity fianakaviana iray. Dada sy Neny ary ny zanany lahikely iray. Rehefa miakatra andrenivohitra dia tsy maintsy mandeha fiara fitanteram-bahoaka. Indray andro raha niakatra aty Antananarivo ilay renim-pianakaviana sy ny zanany kely dia sendra lozam-pifamoivoizana. Tsy nisy naninona izy mianaka tamin’izany. Na dia izany aza nisy akony teo amin’ny fiainan’ity zaza ny toe-javatra natrehany.
Taty aoriana, nisy dia tsy maintsy niakaran’ilay renim-pianakaviana aty Antananarivo indray. Nentiny nanaraka azy ihany koa ilay zanany. Nanatitra teny amin’ny fiantsonan’ny fitanteram-bahoaka ilay raim-pianakaviana. Rehefa tonga teo anefa dia tsy nety niditra ny fiara ilay zaza, izaho tsy hiditra, izaho tsy andeha rehefa tsy mandeha miaraka aminay i Dada hoy ity zaza. Natao ny fomba rehetra, tsy nety izy. Raha mandeha i Dada dia mandeha izahay. Nasehony fa ny miaraka amin’ny dada ihany no azoko antoka fa tsy hisy loza hanjo, eny na misy aza eo Dada afaka miaro.
Tsarovy fa toy izany koa isika! Aza mandeha irery eny an-dalana. Midongia, mitalahoa mba hiara-dalana aminao hatrany ny Rainao Izay any an-danitra. Andriamanitra tokoa no efa niteny hoe : « Aza matahotra fa momba anao Aho ; ary aza miherikerika foana fa Izaho no Andriamanitrao ; mampahery anao Aho sady mamonjy anao ; eny mitantana anao amin’ny tanana ankavanan’ny fahamarinako Aho » ( Isaia 41.10 )
Jaona 21. 20 – 25 no andraisana hafatra ho antsika amin’ity Alahady faharoa manaraka ny Paska ity.
Jaona 21 ahitantsika ny fisehoan’i Jesoa nitsangana ilay nandresy ny fahafatesana tamin’i Petera. Petera ilay mpianatra tena nafana fo tokoa kanefa dia tsy nahajoro, nanda ho tsy mahalala ny Tompo rehefa notsaraina Izy. Raha jerena ny Jaona 21 dia indro i Petera nanadino ny fifidianana azy, niverina nanarato. Jesoa Kristy velona kosa dia miasa, mamerina ho amin’izay efa nifidianana azy dia ny ho mpanarato olona ( Mat 4. 19 ). Hita taratra amin’ny Teny voalahatra amin’ity andro ity fa rehefa voaantso ny olona iray// rehefa voafidy dia tsy mahazo mihemotra intsony fa tsy maintsy mijoro ho vavolombelon’ilay niantso sy nifidy azy. Ny olomboafidy afaka mijoro ho vavolombelona dia izay marina amin’ny fanolorantenany.
1. Vonona hanao ny Sitrapon’ilay nifidy
Voalaza teo fa namerina an’i Petera amin’izay andraikitra efa nifidianany azy i Jesoa Kristy rehefa nandresy ny fahafatesana. Hitantsika izany eo amin’ny and.15 – 17 ny fanolorana indray ny andraikitra amin’ny fiandrasana ny ondrin’Andriamanitra. Nahariharin’i Jesoa Kristy taminy ihany koa anefa, ny toe-javatra tsy maintsy iaretany, tsy maintsy hosedrainy amin’izany fiandrasana ny ondrin’Andriamanitra izany ( Jereo and.18-19 ) na dia izany aza nanamafy ny antso efa nataony taminy i Jesoa : « manaraha Ahy » mila manapakevitra marina ny hanaraka an’i Jesoa Kristy izy na manao ahoana na manao ahoana ny toe-javatra miandry azy.
Tsy maintsy niteny io i Jesoa Kristy, ary tsy maintsy namerina indray io teny io hoe : « manaraha Ahy » ( and.22 ) satria nitady hiherikerika i Petera rehefa nahita an’i Jaona ( and.20 ). Manaraha Ahy toa milaza izany hoe : ny teniko henoina, ny lalana nizorako no araho fa aza miherikerika mijery ny lalan’ny hafa ianao. Manaraha Ahy : meteza ianao hifantoka amin’ny fiantsoana anao, mivonona hanao ny sitrapon’ilay nifidy anao fa aza mitady ny fomba ialana amin’izany. Manaraha Ahy aza mamadika resaka fa mahaiza mifantoka amin’ny andraikitra nametrahako anao. Mazava ny antso : « manaraha Ahy » ianao ry Petera.
Mazava araka izany fa rehefa voaantso, voafidy dia tokony ho marina amin’ny fanolorantena ny tsirairay, ka manao ho zava-dehibe ny fanoavana ny sitrapon’ilay niantso, indrindra ny fahaizana miaino, mankatoa manatanteraka ny Teniny mba ho afaka hijoro ho vavolombelony.
Ry havana malala, ny olona afaka hijoro marina tokoa ho vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo dia ny olona marina amin’ny fanolorantenany. Marina amin’ny fanolorantenany ka vonona hiroso hatrany hanao ny sitrapon’ilay niantso, hankatoa ny sitrapon’ilay niantso sy nifidy azy. Ndeha iverenana ny tantaran’i Jesoa Kristy ilay feno fankatoavana ny sitrapon’ny Rainy. Efa niantso sy nifidy antsika ho vavolombelony ny Tompo vonona ny hanao ny sitrapony tokoa va isika na toa inona na toa inona mety ho toe-javatra mety hihatra amin’ny fiainantsika ? Jereo ny fijoroana vavolombelona nataon’i Paoly Apostoly ( 2 Kor 4. 16… )
2. Manokana ny androny hanambara ny marina ny famonjena.
Hoy ny voalaza and.22 – 25… Mijoro vavolombelona i Jaona fa raha manoratra ny filazantsara izy dia manoratra, manambara ny marina dia ny marina ny amin’i Jesoa Kristy sy ny famonjena notanterahin’ Andriamanitra ho an’izao tontolo izao tamin’ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin’ny maty.
Raha jerena ny voasoratra eto ry havana dia antony lehibe nanosika an’i Jaona nanoratra, nanambara ny marina ireto toe-javatra ireto : izy ilay niankina teo an-tratran’i Jesoa ka ny Tena fitiavan’Andriamanitra, fitiavana nitiavan’i Jesoa izao tontolo izao. Niankina teo an-tratran’i Jesoa izy. Tsapany ny Fon’i Jesoa Kristy tia izao tontolo izao. Teo koa ny valin-teny nataon’i Jesoa tamin’i Petera nanao hoe : and.22… teny nataon’i Jesoa mahakasika ny fiainan’i Jaona, ny ho aviny. Teny maneho fa i Jesoa Kristy dia mandray an-tanana ny fiainany. Resy lahatra, nino izy fa mitondra ny fiainany i Jesoa Kristy noho izany ny tombon’andro nomena azy dia natokany nanambarana ny marina momba an’i Jesoa Kristy. Mijoro vavolombelon’izany i Jaona eto, and.24 – 25…
Izany hoe ny mpianatra, na ny mpanaradia an’i Jesoa Kristy afaka hijoro ho vavolombelon’ny fitsanganany tamin’ny maty dia izay resy lahatry ny fitondran’Andriamanitra ny fiainany ka manolontena marina ho an’i Jesoa Kristy ( marina amin’ny fanolorantena ) ka ny tombon’andro omen’Andriamanitra azy, itondran’Andriamanitra ny fiainany dia natokany hilaza ny amin’i Jesoa Kristy sy ny famonjena azo antoka, izay notanterahiny ho an’izao tontolo izao.
Ry havana malala, ampiasainao ho amin’inona na asa inona ny tombon’andro omen’Andriamanitra ho anao ? Tsarovy fa matoa mbola manana fahavelomana ianao dia Andriamanitra no mitondra, mitantana, mitahiry anao. Tsarovy fa tsy afaka manao na inona na inona ianao eo amin’ny fiainana raha tsy eo Andriamanitra, diniho ny voalaza ao amin’ny Isaia 26. 12 …. Koa amin’izany tombon’andro izany ve mba hainao ny manokana fotoana entina hilazana na hanambarana an’Andriamanitra, ny famonjen’i Jesoa Kristy amin’ny hafa. Tena ilain’ny olona amin’izao vani-potoana izao. Ry havana, ny fisiantsika Fiangonana hanambara an’i Jesoa sy ny asam-pamonjeny. Ny mpino marina amin’ny fanolorantenany dia manokana ny androny na ny fotoanany hilazana amin’ny hafa ny famonjena izay nataon’Andriamanitra ho an’izao tontolo izao tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy.